Ny Fetibe Rhododendron ao Bhutan dia mankalaza ny voninkazo ao amin'ny Royal Botanical Park
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Bhutan » Ny Fetibe Rhododendron ao Bhutan dia mankalaza ny voninkazo ao amin'ny Royal Botanical Park
Ny fararano any Bhutan dia manamarika andianà fety iray raha ny lohataona kosa dia manana ny tsy ampoizina ho an'ny mpitsidika. Fotoana iray amin'ny taona handrobohana ny hatsaran-tarehy mahafinaritra amin'ny lohataona ary hijerena voninkazo isan-karazany any an-tendrombohitra ankoatra ny vorona mpifindra monina.
Ho an'ireo tia voninkazo, fotoana mety izao hijerena ireo karazana Rhododendron dia amin'ny voninahiny feno. Ireo izay nandeha tamin'ny lalan'ny ala rhododendron dia mampitaha azy amin'ny voninkazo serizy any Japon aza.
Ny fetibe Rhododendron mandritra ny telo andro ao amin'ny Royal Botanical Park any Lamperi, manodidina ny 35 km miala ny renivohitra Thimphu, dia traikefa iray tokoa ho an'ireo tia natiora mba hirotsaka amin'ny hatsaran'ny rhododendron dia izay maniry be dia be.
Ny Bhutanese dia mivoaka avy amin'izany ny fampiasana isan-karazany amin'ny Rhododendrons dia hatramin'ny taloha hatrizay. Manomboka amin'ny fanafody an-trano ka hatramin'ny fampiasana azy amin'ny fanafody nentim-paharazana, rhododendron dia niavaka manokana ho an'ny Bhutanese.
Hira Bhutanese marobe no manome voninahitra ny voninkazo noho ny hatsarany kanto.
Mampiseho karazana rhododendron samihafa izay mamony tanteraka amin'ny volana Mey, mankalaza ny voninkazo ao amin'ny valan-javaboary Lamperi ny fetibe rhododendron telo andro. Natomboka tamin'ny 2013, ny festival rhododendron dia hetsika fanao isan-taona.
Ny zaridaina botaniera Lamperi dia mirakitra ny karazana rhododendron avo indrindra miaraka amin'ny 29 amin'ny fitambarany 46 izay nambolena tao Bhutan.
Miaraka amin'ny voninkazo rhododendron amin'ny tendrony amin'ny volana Mey, fotoana mety indrindra hampisehoana ny hakanton'ny rhododendron, satria fotoana iray ihany amin'ny taona ahitan'i Bhutan fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpizahatany.
Ny festival rhododendron dia antenaina hamorona sehatra hampiroboroboana ny fizahantany ara-tontolo iainana ary koa hamorona fahafaha-mianina amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Manasongadina ihany koa ny ezaka amin'ny fiarovana ny firenena sy ny firindrana misy eo amin'ny olona sy ny valan-javaboary. Izy io koa dia mikendry ny hanatsara ny fahafaha-manao ecotourism, manome fomba ahazoana miditra vola hipetraka amin'ireo mponina ankoatry ny fampisehoana ny fahasamihafana misy amin'ny rhododendrons sy ny ekolojia mifandraika amin'izany ao Bhutan.
Hifantoka amin'ny tontolo iainana, kolontsaina, sakafo ary fialamboly ny festival. Izy io koa dia lalana iray hampidirana ireo lohahevitra ekolojika sy kolontsaina amin'ny alàlan'ny fialamboly.
Mandritra ny fetibe telo andro dia ankafizo ireo hira nentim-paharazana Boedra sy Zhungdra mifandraika amin'ny natiora nataon'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Mandehandeha mamakivaky ireo fivarotana isan-karazany mampiseho ny fiveloman'ireo vondrom-piarahamonina eo akaiky eo sy ny fiankinan'izy ireo amin'ny loharanon-karena. Ny hetsika dia arahin'ireo fandaharana ara-kolontsaina hafa sy hetsika fanabeazana momba ny fiarovana ny tontolo iainana ataon'ny ankizy mianatra.
Ny mpitsidika koa dia afaka manao fiakarana fohy sy lava any amin'ny valan-javaboary mba hahitana karazana rhododendron isan-karazany ary hiroborobo amin'ny harena ara-tontolo iainana.
Ny fahafantarana ny maha-zava-dehibe ny fety toy izany ho fitaovana matanjaka hampiroboroboana ny faritra mety hitrandrahana ny tontolo iainana sy ny fidiram-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, dia natomboka tany amin'ny valan-javaboary manerana ny firenena nanomboka ny taona 2009.
Ny valan-javaboary manerana ny firenena dia faritra arovana ary matetika ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana izay mipetraka sy manodidina ny valan-javaboary dia voahilikilika mba hameperana ny fitrandrahana harena voajanahary avy amin'ireo faritra arovana.
Ny fety toy izany, noho izany, dia natao ho sehatra ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana hanatsara ny fivelomany amin'ny alàlan'ny fizahana na fampiratiana hetsika mety hatao ao amin'ilay faritra.
Ny fetibe rhododendron fanao isan-taona dia nokarakarain'ny Diviziona Recreation sy Ecotourism eo ambanin'ny minisiteran'ny fambolena miaraka amin'ny fanohanan'ny Filan-kevitry ny fizahan-tany any Bhutan ary misy ihany koa ny fandraisana anjaran'ny fiarahamonina sy ny sekolin'i Toeb, Dagala, Chang ary Kawang gewog amin'ny alàlan'ny komity iray, Meto Pelri Tshogpa, Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany Bhutanese, ary Association Fikambanan'i Bhutan, ankoatry ny hafa.
Mampifandray an'i Buenos Aires amin'i Afrika ny Ethiopian Airlines
50 minitra lasa izay